Samachar Batika || News from Nepal » रा’हत दिनलाई यतिसाह्रो च’टक !(तस्विरसहित)
रा’हत दिनलाई यतिसाह्रो च’टक !(तस्विरसहित)
काठमाडौं । सरकारले देशव्यापी लकडाउन गरेसँगै देशभित्र ‘हुने खाने वर्ग’ र ‘हुँदा खाने वर्ग’ बीच स्पष्ट विभाजन रेखा कोरिएको छ । हुनेखाने वर्गका मानिसहरु होम क्वारेन्टाइनमा बसेर थरिथरि परिकार ‘ट्राइ’ गरिरहेका छन् र, त्यसको फोटो सामाजिक सञ्जालमा हालेर आफ्नो ‘औ’कात’ प्र’दर्शन गरिरहेका छन् । हुँदा खाने वर्गचाहिँ दैनिक गु’जाराका लागि रा’हत माग्न अनेक ठाउँ हात फै’लाइरहेका छन् ।
सरकारले स्थानीय तहमार्फत वि’पन्न परिवारहरुको छनोट गरि रा’हत बाँड्ने र’णनीति लिएको छ । यस्तै, विभिन्न संघ–संथा र व्यक्तिले पनि आ–आफ्नै शै’लीले रा’हत बाँडिरहेका छन् । तर, यतिबेला रा’हत वितरण कम्ता चु’नौतिपूर्ण छैन । सामाजिक दुरी कायम गर्दै पि’डितका हातसम्म राहत सामग्री पुर्‍याउनु छ ।
त्यसको फोटो पनि खिच्नैपर्‍याे । सर्प पनि म’र्ने र ल’ठ्ठी पनि न’भाँचिने शैलीमा रा’हत बाँड्न जनप्रतिनिधि र संघ–संस्थाले विभिन्न उपाय लगाइरहेका छन् ।
अहिले विभिन्न भा’गभंगिमामा रा’हत वितरण गरिएका थुपै्र तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा सेयर भइरहेका छन् । ती तस्वीर हेर्दा नचाहेर पनि हाँस्न कर लाग्छ । थोरै सामग्री दिनलाई दर्जनौं व्यक्तिहरु वरिपरि झुम्मिएका हुन्छन् । अनि गोदान गरेको शै’लीमा मुख्य दातालाई सबैले छुन्छन् । सबैको अनुहारमा गौरवपूर्ण मुस्कान हुन्छ, यति गरेपछि समाजसेवीको दर्जामा परियो भन्ने भावसहितको ।
आज एउटा तस्वीर खुबै भा’इरल भइरहेको छ । तस्वीरमा दाताले राहत बाँड्न निकै मौलिक जुक्ती लगाएका छन् । उनको हातमा एउटा लामो भाटो छ, जसको माथिल्लो भागमा थोरै चि’रा पारिएको छ । त्यो चि’रामा उनले एउटा सानो वस्तु (सम्भवतः सावुनको डल्लो) चे’पेका छन् । अनि त्यो लामो भाटो पि’डितसम्म पुग्नेगरि तेस्र्याएका छन् ।
झट्ट हेर्दा ला’ठीचा’र्ज गरेको प्रतीत हुन्छ । अलि नियालेर हेर्दा सेल्फी स्टिक प्रयोग गरेर तस्वीर पो खिचिरहेका हुन् कि भन्ने पनि लाग्छ । तेस्रो प्रयासमा मात्रै तपाईंले बुझ्न सक्नु हुन्छ कि रा’हत वितरण रहेछ ।
यतिबेला लकडाउनले धेरैको रोजिरोटी खोसिएको छ । दैनन्दिन काम गरेर गु’जारा गर्नुपर्ने वर्ग नराम्ररी प्र’ताडित भइरहेको छ । त्यसैले उनीहरुलाई राहतको खाँचो छ । तर, राहत वितरण गर्दा सरल तरिका अपनाउन सकिन्छ । अनावश्यक भिड जम्मा गर्नु आवश्यक हुन्न ।
फोटो खिच्नु पनि अपरिहार्य नहोला । दुरी कायम गर्दै रा’हत दिनलाई यतिसाह्रो च’टक आवश्यक पर्दैन । सामग्रीहरु एक ठाउँमा राखेर पी’डितहरुले पालैपाले लैजाने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । चर्चाको लो’भ गर्दा राम्रो काम गर्दा पनि अनावश्यक रुपमा हाँसोको पात्र बन्न पुगिन्छ ।
रा’हत वितरणका उ’टपट्याङ दृश्यहरु अहिले मात्रै देखिएका होइनन् । भुकम्पदेखि शीतलहरसम्ममा गर्दा यस्ता दृष्यहरु देखिने गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा भेटिएका केही तस्वीर हामीले संकलन गरेका छौं ।
अहिले विभिन्न भा’गभंगिमामा रा’हत वितरण गरिएका थुपै्र तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा सेयर भइरहेका छन् । ती तस्वीर हेर्दा नचाहेर पनि हाँस्न कर लाग्छ । थोरै सामग्री दिनलाई दर्जनौं व्यक्तिहरु वरिपरि झुम्मिएका हुन्छन् । अनि गोदान गरेको शै’लीमा मुख्य दातालाई सबैले छुन्छन् । सबैको अनुहारमा गौरवपूर्ण मुस्कान हुन्छ, यति गरेपछि समाजसेवीको दर्जामा परियो भन्ने भावसहितको ।(श्रोत:अनलाईन खबर)
प्रकाशित मिति २६ चैत्र २०७६, बुधबार ०६:४२